बुधबार, ०५ कार्तिक २०७७, ०८ : ३४
न धेरै जाडो न त गर्मी । घुम्न जानलाई रमाइलो र उपयुक्त मौसम पनि यही हो । त्यसैले नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटक अनि पोखरा हेर्न र घुम्न चाहने स्वदेशीको पनि घुइ“चो लागेको छ, यतिबेला पोखरामा । पोखराका युवा भने अन्यत्र घुम्न निस्किएका छन् ।
पूर्वी पहाड घुम्ने सिजन
हिउँद लागेसँगै आकाश खुल्न थालेको छ । निलाम्मे आकाश, छर्लङ हिमालले आहा ! बोध हुन्छ । चाडबाडको मुडमा छ्याङ उघ्रिएको घमाइलो मौसम तथा मस्तहरियालीले मन लोभ्याउँछ । यो बेला पूर्वी पहाड घुम्ने सिजन हो ।
दर्शन–साहित्य : अगति जीवन
संसारले उक्साएकै भरमा, संसारले नै कोरेको नक्सामा हामी अघि बढिरेहका छौँ । संसारले संसारकै बाटोमा डोर्याउँछ— तपाईंको आफ्नो बाटोमा होइन । समाजले पनि करुणावश प्रगतिको मार्गमा संघर्ष गर्न उप्रेरित गर्छ । किनभने समाजलाई थाहा छ, समाजको वास्तविकता — त्यो अत्यन्त निर्दयी छ । जो अघि बढ्न सक्दैन उसलाई काँचै निलिदिन्छ । उसलाई कठिनाइ हुन्छ । उसको अस्तित्व मेटिन्छ ।
असफल बन्न चाहने को होलान् ? सबैको चाहना सफलता प्राप्ति नै हो । ग्रोथ नै हो । समाज र राष्ट्रलाई सकेको योगदान दिनु हो । यसो भन्दैमा सबै सफल भएका छन् त ?
डरपोक संगीतकारको उदय
सन् १९७३ मे २५ तारिखका दिन भर्जिन कम्पनीले आफ्नो पहिलो चारवटा एल्बम रिलिज गरेको थियो । जसमध्ये माइक वल्डफिल्डको ‘ट्युबलर बेल्स’ एउटा थियो । नौ महिना लगाएर कम्पोज गरिएको यो एल्बम अरुभन्दा निकै अलग थियो ।
अब तीज सबैको
हिजो खस, बाहुन र क्षेत्री समुदायको मात्र पर्व मानिने तीन समयअनुसार बदलिँदैछ । जनजाति, मधेसी सबै समुदायले सहज रुपमा स्वीकार गर्दैछन् यो पर्वलाई । रातो सारीमा सजिने अनि तीजे भाकामा छमछम नाच्न सबै समुदायका महिला उत्तिकै हौसिएका देखिन्छन् अहिले ।
हठी बडी बिल्डरको अमेरिकी सपना
उनको बडी बिल्डिङप्रतिको अनावश्यक मोह हटाउन मनोवैज्ञानिक चिकित्सकसामू परामर्शका लागि लगियो । चिकित्सकले आर्नोल्डको अवस्था सामान्य रहेको र युवा अवस्थामा यस्तो सोच आउनु स्वाभाविक रहेको र पछि उनी आफ्नो धरातलमा आउने कुरा बाबुआमालाई सम्झाए । यसपछि उनलाई हप्ताको तीन पटक भन्दा बढी जिम गर्न रोक लगाइयो ।
४० वर्षमै देशको काया कसरी फेर्ने ?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लिएर देङका केही निजी विश्वास र सिद्धान्त थिए । उनी आफूलाई ‘लो प्रोफाइल’मा राख्न चाहन्थे र राख्थे पनि । देङको एक्लो उद्देश्य भन्नु नै चिनियाँ अर्थव्यवस्थामा तीव्र परिवर्तन ल्याउनु नै थियो ।
पिठ्यू, गाला, घाँटी, कम्मर, पेट र हातमा आठ राउन्ड गोली लागेर पनि कोही बाँच्न सक्ला र ? असम्भव ! एकै गोलीले पनि व्यक्तिको इहलीला समाप्त गरिदिन्छ तर राम्रो स्वास्थ्य सुविधा र भाग्यले साथ दियो भने कसैको केही लाग्दैन । यसैको उदाहरण बनिन् अमेरिका निवासी ३० वर्षीया रचना श्रेष्ठ
विश्वविद्यालय अनुसन्धान, खोज र आविष्कारका प्रमुख स्रोत हुन् । यी क्षेत्रमा कस्ता जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् भन्ने हेर्न त्रिविको स्तानक र स्नातकोत्तर तहको उत्तीर्ण प्रतिशत हेरे पुग्छ ।
पेंडुलम घडीको सिद्धान्त
रब्बीकी पत्नीले सम्झाउँदै भनिन्, ‘किन यति साह्रो रिसाउनु भएको ? तातो रिस गरेर हुन्छ ? लाइब्रेरीमा हजारौँ पुस्तक छन् । यो एउटा पुस्तक पनि त्यहीँ राखिदिनुस् न ! पछि फ्याँक्न मन लागे पनि फ्याँक्नु होला । किन विचरा चेलाको मन मन दुखाउनु हुन्छ ? यस्तो नकारात्मक प्रतिक्रियाको कुनै आवश्यकता छैन ।’